बैतडी अस्पतालमा छैनन् डाक्टर- सुदूरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
बैतडी — एउटा जिल्ला अस्पताल र २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको बैतडीमा दरबन्दीअनुसार डाक्टर नहुँदा बिरामीहरू उपचार पाउनबाट वञ्चित छन्  । जिल्ला अस्पतालमा ३ डाक्टरको दरबन्दी रहेकामा एउटाले मात्रै धानेका छन्  ।
निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जगदीशचन्द्र विष्टले हालसम्म काम चलाउँदै आए पनि संघमा समायोजन भएकाले उनी पनि हिँड्ने तयारीमा छन् । २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा २ डाक्टरको दरबन्दी भए पनि रित्तै छन् ।
जिल्ला अस्पतालमा ४ स्टाफ नर्सको दरबन्दी भए पनि सबै पद खाली छन् । सोहि ठाउँमा पनि करारका कर्मचारी भर्ना गरी सेवा प्रवाह गरिरहेका विष्टले बताए । उनले भने, ‘एक ल्याबका कर्मचारीको पद पनि खाली छ ।’ जिल्ला अस्पतालमा अन्य २ करार सेवाका डाक्टर पनि कार्यरत छन् । उनीहरूको म्याद असारदेखि थप भएको छैन । म्याद थप हुने आशाले काम गरिरहेको उनीहरू बताउँछन् । १५ शय्याको जिल्ला अस्पताल स्थापना भएको २८ वर्षमा कहिल्यै पनि दरबन्दीअनुसार डाक्टर र अन्य कर्मचारी पूर्ति भएनन् ।
विकटमा पर्ने तल्लो स्वराड क्षेत्रमा रहेको एकमात्र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि डाक्टरविहीन छ । त्यहाँ कार्यरत डा. जीवन कार्की गत फागुनमा अध्ययन बिदामा गएपछि अहिले हेल्थ असिस्टेन्टका भरमा अस्पताल चलिरहेको छ । निमित्त भएर काम गरिरहेको हेल्थ असिस्टेन्ट मुकेश दयाल बताउँछन् । मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि डाक्टरविहीन हुँदा स्थानीय बासिन्दा सेवाबाट वञ्चित भएका हुन् । यस्तै पाटन नगरपालिकामा रहेको पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पनि करारका एक डाक्टरकै भरमा चलिरहेको छ । डा. नवीन्द्र ढकाल अध्ययन बिदामा गएपछि करार सेवाका डाक्टरले सेवा दिइरहेका छन् । स्टाफ नर्सको पद पनि रिक्त छ । पालिकामै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल जानुपर्ने बाध्यता रहेको मेलौली १ का धीरेन्द्र नेगी बताउँछन् ।
प्रकाशित : भाद्र २५, २०७६ १३:१८
बैतडी — मुलुकका विभिन्न जिल्लामा डेंगुको प्रकोप फैलिरहेका बेला बैतडीमा भने औंलोका बिरामीहरू भेटिन थालेका छन्  । दशरथचन्द नगरपालिका ९, जोशीबुंगाकी लक्ष्मी ओडलाई सोमबार औंलो देखिएको हो  ।
३० वर्षीया उनी लगातार ७ दिनभन्दा बढी ज्वरो आएपछि बेहोस भएकी थिइन् । त्यसपछि उपचारका लागि आफन्तले जोशीबुंगा स्वास्थ्य चौकी पुर्‍याउँदा उनलाई औंलोको संक्रमण देखा परेको हो ।
रगत जाँच गर्दा उनमा औंलो देखिएको स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शिवकुमार कठरियाले बताए । हाल बिरामीलाई आफुहरूले निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य संस्थामा औषधीहरू उपलब्ध भएकोले बाहिर पठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । तल्लो स्वराड क्षेत्रमा विगत ४ वर्षयता देखिन थालेको औलौ पछिल्लो समय अन्य स्थानमा पनि सर्दै गएको देखिएको छ ।
मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि औंलोका बिरामी भेटिन थालेको स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी भुवन जोशीले बताए । पहिले तराईमा मात्र देखिने औंलो पहाडमा पनि देखिन थालेको भन्दै उनले जिल्लामा बर्सेनि यसका बिरामी देखापर्ने गरेका बताए । बैतडी पहाडी जिल्ला भए पनि औंलोको जोखिम भएको स्थानमा राखिएको उनले बताए । आव ०७५/७६ मा ३१ जनामा औंलो देखिएको उनले बताए । यसमा २ गर्भवती महिला पनि छन् । लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने यो रोगबाट बच्न स्वास्थ्य कार्यालयले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेको उनी बताउँछन् । साथै तल्लो स्वराड क्षेत्रका औंलो जोखिमयूक्त स्थानमा वर्षेनी झुल वितरणलगायत कार्यक्रम पनि गर्दै आइरहेका उनले बताए ।
बैतडीमा हालसम्म डेंगुका बिरामीहरू भने नभेटिएको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले भने सर्तकता अपनाएको बताउँदै उनले १० वटै पालिकामा स्वास्थ्य संयोजकको नेतृत्वमा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरिएको बताए । डेंगु, औंलोलगाएतका कुनै पनि रोगको महामारी फैलिएमा तत्काल समाधान गर्न टोली बनाइएको जोशी बताए । महामारी फैलिएको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रण गर्न टोलीले समन्वय गर्ने, सुचना संकलन गर्ने र औषधोपचार गर्ने लगाएतका काम गर्ने जोशी बताउँछन् ।
जिल्ला अस्पतालसँगैं अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लगातार हप्ता दिन भन्दा बढि ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, रिँगाटा लाग्ने, वान्ता हुनेलगायत बिरामीहरूको संख्या असारयता बढेपनि डेंगु देखा नपरेको उनले बताए । जोखिममा रहेको पालिका भएकोले जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू, झुल वितरण लगाएतका कार्यहरू गरिएको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए । उनले भने, ‘पालिकामा केहि वर्षबाट लगातार बिरामीहरू भेटिरहेका छन् । हामी आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेका छौं । ’